WAX KA BARO Calaamadaha Cudurka COVID-19,W/Q Prof Omar Osman Hersi Xiis
Sidaa-awgeed, waa lagama maarmaan dhaqdhaqaayada noocan oo kale ah inay hoggaanka u qabtaan aqoonyahanno xil kas ahi, waana hab dhaqan togan oo loo baahan yahay inay bulshadu qabatinto. War murtiyeedkii macallimiinta gobolka Togdheer waxa ka muuqatey aqoonyahannimo, aftahannimo iyo xarrago hadal aany hoos ugu daadegin tabashadoodii. Kolley anigu waan ku diirsaday. Haddaba, waxan kula talin lahaa macallimiinta in aanay lumin fursadda maanta isu keentay ee midaysay. Waxa habboon inay samaystaan urur u dooda sida “Ururka Macallimiinta Togdheer” kaas oo u gudbi kara gobollada dalka oo dhan oo noqon kara “Ururka Macallimiinta Somaliland” (Somaliland National Teachers Union).